Tọgharia takeswa na-akpọrọ gị gaa na 2084 gaa ụwa nke na-apụ n'anya | Gam akporosis
Tọgharia iswa bụ egwuregwu egwuregwu ọhụụ nwere ndabere apocalyptic n'ime nke anyị ga-achịkwa nke ndị na-eto eto 3 na-alụ ọgụ megide GROW, ọrịa na-ama mmadụ niile nsogbu na-egbochi anyị ịkarị 25 afọ.
Egwuregwu arụ ọrụ nke ọma na ihe ngosi ahụ na imepụta mmiri mmiri Nke ahụ dị ezigbo mma na ya, nke ahụ na-apụtakwa maka ọkwa ndị ahụ sara mbara nke ọtụtụ oge ụgbọ elu ga-emepe iji wulie nnukwu jupụta ma meghee mpaghara ọhụrụ mgbe anyị na-egwu. Ka anyị jiri egwuregwu egwuregwu post-apocalyptic a na-atọ anyị ụtọ nweta ya nke na-akpọrọ anyị gaa na ihe yiri Cyberpunk 2077.
1 Na-alụ ọgụ tolite
2 Na-etinye ụda olu na ozone oyi akwa na Tọgharia ụwa
3 Ima elu ma gbaa ọsọ n’akwụsịghị akwụsị
Na-alụ ọgụ tolite
La cyberpunk aesthetic bụ omume na-ewu ewu nke Cyberpunk 2077, egwuregwu a tọhapụrụ site CD Project na na PC Player na-anụ ụtọ karịa console omume; N'agbanyeghị echefula ule anyị mere Ray Trace ya na Geforce UGBU a site na Chrome.
Na Tọgharia wewa anyị nwere ihe yiri nke ahụ na ndapụta na ndabere nke usoro ikpo okwu a na-agba anyị na-ejide ndị na-eto eto 3 na-anwa ime ka ihe siere GROW ike, na ọrịa ahụ na-egbochi uto gafere afọ 25.
Anyị aka ndị protagonists dị ka ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu na a akara mkpisi maka ije, na usoro nke bọtịnụ maka ịwụ elu ma ọ bụ ịwụ elu abụọ, na onye ọzọ ịkụ ọkpọ nke ahụ ga-adị irè maka omume dị iche iche dị ka ibibi ọnụ ụzọ ma ọ bụ rụọ ọrụ hacks iji chịkwaa ebe.
Na-etinye ụda olu na ozone oyi akwa na Tọgharia ụwa
Tọgharia Earthwa Adịghị n'azụ mkpu ahụ maka enyemaka iji mara ebe anyị na-aga ọ bụrụ na anyị aga n'ihu na ụdị ndụ a na usoro nke anyị na-eri ngwa ngwa ụwa ngwa ngwa.
Lee anyị na-ewetara mbara ala n'afọ 2084 ebe ozone oyi akwa na-aga ịla n'iyi na nnukwu ọrịa na-egbochi ndụ site na ndu ya. Iji mee nke a, anyị ga-enwe mgbagwoju anya na ihe dị iche iche anyị ga-anwale ịgafe.
Anyị ga-enwe ohere nke nyochaa mpaghara niile na ọbụlagodi ịchọta ụfọdụ ihe nzuzo. E nwere hacking unlock kpọghee ekwt ọcha na-ekwe ka anyị nọgide na, ma si otú anyị na-ahụ a nnọọ ike n'elu ikpo okwu nke na-awụlikwa elu na "parkour" bụ akụkụ nke ya ntụrụndụ.
Ima elu ma gbaa ọsọ n’akwụsịghị akwụsị
Ese ike na-eme ka anyị banye n'oge dị egwu, tumadi mgbe emepere maapụ ahụ site na mbugharị na-egosi anyị akụkụ nke ụzọ anyị ga-eso; ewezuga ọtụtụ ihe na-akpata esemokwu dịka ụdị igwe dị iche iche anyị ga-eche ihu.
Ihe mbụ na-ekwu na Tọgharia ụwa anyị masịrị ya maka mmetụ mmiri a, ọ bụ ezie na ọ bụghị oke nkọ, nke ụwa gbara anyị gburugburu, nyiwe, njirimara agwa na ndị ọzọ. Ọ na-agagharị nke ọma na jumps ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe obi ụtọ ịkwaga protagonist site na ebe a gaa ebe ọzọ. Ọkwa dị ọtụtụ, n'agbanyeghị ndụ ụfọdụ na-efu na ọkwa ahụ, ebe ọ bụ na ewezuga anyị, ọ nweghị ihe ọ bụla dị ndụ na-agagharị.
Tọgharia ụwa na-abịa na ogige zuru ezu ka ị ghara ịkwụsị ịgba ọsọ na ịwụli na egwuregwu nke eji otutu ndi ozo eme ihe dị ka ịgba ọsọ. I nwere ya n’efu site na Storelọ Ahịa Play iji mata.
Dị ike nke ukwuu na-awụlikwa elu na a ọma dọtara gburugburu ebe obibi na-enye ezi platforming obi.
Usoro edemede: 6,3
Ugboro abụọ ahụ na-awụda na mgbe ụgbọ elu ga-emepe
Etoju nke bukwanu ndọtị
Mmiri mmiri na-emetụ eserese
Enweghi ndu ma obu mmeghari ozo ma obu onye ozo
Developer: UNEP (United Nations Environment Mmemme)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nyere umuaka ato ahu aka site na uwa ohuru n'ime Tọgharia Uwa
Moba Xtreme Racing bụ nloghachi na egwuregwu vidio nke akụkọ ifo Victor Ruiz nke Dynamic Software